Gunyana 6, 2018 arun
Coinbase rinoongorora Bitcoin ETF nokubatsirwa Blackrock
Coinbase ari kutarisa kuti pave chigadzirwa Exchange-mhindu yakasungirirwa crypto, maererano vanhu vanoziva nyaya yacho, senzira kubvumira chitoro vanoita kuti kuwana kune yainge kumusika. In achangopfuura mavhiki zvakasimba akambomisa kukurukurirana nhengo Working Group BlackRock kwakaita blockchain kuti vawane kupinda yakasimba Unyanzvi pamwe nezvekutanga Exchange-mhindu zvigadzirwa.
Coinbase vakanga rakazivisa indekisi Fund, 6 ago, pamusoro cryptocurrencies zvainanga aizivikanwa zviri pamutemo vanoita. imwe ETF, zvisinei, iri dzakagadzirirwa kune zvakawanda zvikuru vanoita. Kana Coinbase vaifanira kutanga crypto ETF, izvozvo vaizouya zvinoverengeka dzimwe yemakambani vakatarira kuti vomurova dzavo, kusanganisira aikwikwidza Gemini, Bitwise Chakanaka Management, uye VanEck.
Chinese guta anoshandisa blockchain kuti chamber kufamba angaratidza pamusoro Chamba
Angaratidza pamusoro Chamba kumaodzanyemba Chinese guta Zhongshan anogona zvino pachavo vari amuwane yakawana pamusoro blockchain Network. The kururamisira dhipatimendi pamusoro Zhongshan inoti yava yakatanga blockchain-based system kuongorora kufamba Aimbova vasungwa kuvandudza kunzi “munharaunda kururamiswa.”
Parolees vanofanira wotarisa uye kupedzisa mabasa ezuva nezuva iyoyo achikwira kwokuwirirana Data pamusoro nomumwe musungwa kufamba, saka munharaunda gadziriso tsvimbo uye akakodzera Vezvemitemo vanopiwa mukana pomumbure vanokwanisa kuziva musungwa wacho kwaunenge chero nguva, uye nokudaro anogona kutora matanho anodiwa kana munhu kutyora kubva runodiwa purogiramu. The kururamisira dhipatimendi aiti kuti mabikirwo anokwanisa kuderedza manpower mutoro kuti rakagara richidudzirwa kunodiwa kuti panyama kutevera parolees kana kuona vari kuteerera mitemo uye achiita munharaunda basa.
High Times anogamuchira Bitcoin ayo IPO
The Cannabis bhuku High Times kubvuma cryptocurrency nokuda kwayo kunoenderera kutanga pachena chinopiswa (IPO). High Times mumiriri Jon Cappetta akasimbisa kuti kambani kubvuma Bitcoin sezvo muripo nezvechisarudzo. Cappetta akati kuti pamutemo pakunamata (ichitoratidza zvimwe) yakaitwa “kuti SEC afare.”
It kusvetuka kuti Fund America ari kushandiswa pakarepo kutendeutsa crypto kupinda US madhora. High Times’ IPO pachayo kuenda zvakanaka, akati chivharo, uye boka iri akatarira zvakananga vanonyorwa somugumisiro. “The Regulation A [fundraising] ari kuenda kuvhara musi wa12 mwedzi uyu, uye kubva ipapo isu uchatanga yataura muitiro” akati.
Kraken Daily Market Mushumo 05.09.2018
$172M nhumbi mhiri misika zvose nhasi